कारण कठिन पर्यावरण शर्तहरूमा, अधिक मान्छे antihistamines माग धेरै छन् त्यसैले, एलर्जी देखि ग्रस्त छ। एलर्जी प्रतिक्रिया दुवै बच्चाहरु र वयस्क अधीनमा छन्। प्रत्येक वर्ष, दबाइ कम्पनीहरु को यस समूहमा नयाँ लागूपदार्थ उत्पादन।
"Suprastin" दबाइ यस लेखमा छलफल गरिनेछ। एक दबाइ को एक अधिमात्रा - असामान्य छैन।
दबाइ को विवरण
दबाइ "Suprastin" एलर्जी को लागि एक सिद्ध र व्यापक प्रयोग उपाय छ। नियम, एक एलर्जी यसको exacerbation गिरावट र वसन्त र गर्मी को सुरुमा पाइन्छन्, मौसमी छ। रूखहरू, चिनार fluff, जडीबुटी को पराग गम्भीर एलर्जी पीडित जीवन जटिल शक्तिशाली allergens छन्। सूर्य, आत्माको, भोजन, पाल्तु जनावर dander, घरेलू धूलो, कीरा बाइट्स: अन्य कारक एलर्जी कारण संभावना।
निम्न लक्षण एलर्जी प्रकट मा exacerbation को अवधि मा: नाक भीड, पानी जस्तो आँखा, श्लेम लाग्एको भीड, खुजली, को घाँटी को गंभीर सुनिंनु, श्वास संग interfering, दुखेको घाँटी, एलर्जी खोकी सुरु हुन सक्छ। यी टाउको दुखाइ, निदाउरोपनको को संकेत को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, lethargy विकास, त्यहाँ एक टूटने छ, त्यहाँ अवस्थामा पनि निराशा छन्। केही अवस्थामा, यो दबाइ "Suprastin" ओवरडोज आउन सक्छ?
अधिमात्रा गर्न प्रमुख?
एलर्जी को लक्षण राहत गर्ने प्रयास केही मानिसहरू राहत हुनेछ भनेर आशा, antihistamines को प्रशासन को औषधिको खुराक र आवृत्ति वृद्धि गर्न सुरु, र तिनीहरूले जीवन को पुरानो ताल फर्कन सक्नुहुन्छ। यस्तो क्षणमा मा, मानव टाउको मात्र एउटा कुरा कब्जा छ - एलर्जी लक्षण सुख, र तपाईं दबाइ मा अधिमात्रा सक्नुहुन्छ, पनि लाग्छ छैन। का यसको dosing रूपमा लागूपदार्थ "Suprastin" कसरी लिन र एउटा अधिमात्रा समयमा हुन सक्छ हेरौं।
औषधिको खुराक सुविधाहरु व्यक्तिगत डाक्टर द्वारा प्रत्येक रोगी लागि गणना गरिएको छ। तर, केही मानिसहरू क्लिनिक गर्न हतार छैन र आफूलाई गर्न लागूपदार्थ सल्लाह दिन्छन्। फलस्वरूप, आत्म-दबाइ "Suprastin" अधिमात्रा आउन सक्छ। बच्चाहरु, यो प्राय धेरै पटक हो।
मुख्य सक्रिय संघटक अर्थ "Suprastin" - Chloropyramine। उहाँले एलर्जी को लक्षण relieves र उनको घटना रोक्न मद्दत गर्छ।
सजिलै जठरांत्रिय पर्चा मा भिगो, आधा घण्टा पछि दबाइ कार्य गर्न थाल्छ। त्यो द्रुत अवशोषण यो अधिमात्रा मामलामा खतरनाक बनाउँछ। एक घण्टा पछि दबाइ अधिकतम प्रभाव आउँछ र बारेमा6घण्टा रहन्छ।
हामी दबाइ को प्रयोग को लागि निम्न सङ्केत गर्छ ध्यान दिनुहोस्:
विभिन्न etiologies (भोजन, औषधी), मौसमी उत्तेजना को एलर्जी;
छाला रोग, उदाहरणका लागि, एक्जिमा को विभिन्न प्रकार;
रोकथाम र anaphylactic प्रतिक्रिया को उपचार।
साथै, "Suprastin" लागूपदार्थको तीव्र भाइरल रोग को उपचार को लागि संकेत गर्नुभयो।
तर यो दबाइ यो जस्तो सक्छ रूपमा सुरक्षित छैन रूपमा, एक डाक्टर मात्र निर्धारित गर्नुपर्छ प्रयोग गर्न।
वयस्क निर्धारित 1 ट्याब्लेट 2-3 पी / s। प्रति दिन अधिकतम खुराक -6ट्याब्लेटको। मात्र आफ्नो डाक्टर परामर्श पछि रकम लिन।
बच्चाहरु मा, औषधिको खुराक उमेर मा निर्भर गर्दछ। 1 वर्ष 1 महिना देखि शिशुहरू, दबाइ एक पाउडर एक-चौथाई गोली, पूर्व-जमीन दिएको र पानी मा भंग गरिएको छ।
बेबी अप6वर्ष एक चौथाई ट्याब्लेट तीन पटक एक दिन सकेसम्म धेरै poltabletki मा एक दिन निर्दिष्ट गर्न, तर दुई पटक।
poltabletki3पी / घ को 14 वर्ष मुनिका बच्चाहरु लागि औषधिको खुराक। अधिकतम औषधिको खुराक एक दिन तीन पटक एक ट्याब्लेट "Suprastin"। कडाई दबाइ को प्रयोग को लागि निर्देशनहरू पालना भने एक अधिमात्रा देखापर्ने छैन।
पनि नियुक्ति "suprastin" समयमा खातामा लग्नु गर्नुपर्छ जो पहिचान दबाइ र contraindications, मा।
दवादारू घटक idiosyncrasy;
एक तीव्र फारममा अस्थमा;
नवजात र अकाल बच्चाहरु दबाइ तोकिएको छैन;
गर्भावस्था र lactation।
अधिमात्रा "suprastin" यी सबै अवस्थामा बढी सम्भावना आउन सक्छ। यो नतिजा धेरै गम्भीर छन्।
गर्भावस्था र lactation मा दबाइ लागू contraindicated छ। तर रोग को खतरा दबाइ को नकारात्मक प्रभाव भन्दा ठूलो छ भने, एक अपवाद छ। सावधान रहनुहोस् तयारी भएको अन्तस्करणले र कलेजो, वृद्ध को रोगहरु बाट ग्रस्त गर्ने विरामीहरु गर्न निर्धारित गरिएको छ।
दबाइ को भाग रूपमा विशेष गरी बच्चाहरु मा, यसको घृणाको साथ विरामीहरु यसलाई assigning, छलफल हुनुपर्छ भनेर वर्तमान lactose छ।
उपचार मा "Suprastin" रक्सी पिउने कडाई वर्जित छ हो।
दबाइ साइड इफेक्ट छ, तर तिनीहरूले अक्सर उत्पन्न छैन:
अलि कति चक्कर आना;
नाडी अनियमितताहरु, arrhythmia;
अधिमात्रा "suprastin": लक्षण
जब दबाइ को अनियन्त्रित प्रयोग सम्भव अधिमात्रा, द्वारा निम्न लक्षण प्रकट भएको छ:
आन्दोलनहरु को गरीब समन्वय।
Dysmotility, मांसपेशिहरु मा कमजोरी।
असामान्य involuntary आन्दोलनहरु।
अधिमात्रा छोराछोरीको "suprastin": लक्षण
मुख को सूक्खापना।
"Suprastin" को एक अधिमात्रा संग तेजी विकास जो नशा, आउँछ। त्यसैले, यो चाँडै आवश्यक सहयोग उपलब्ध मनमोहक छ। विषाक्त प्रभाव अक्सर उजागर छाला, श्वसन अंगहरु, जठरांत्रिय अंगहरु, श्लेम लाग्एको झिल्ली।
सबै को पहिलो, "suprastin" को एक अधिमात्रा संग नशा को संकेत हटाउन antidotal चिकित्सा लगिनेछ। एक विशेष विषको असर रोक्ने औषघि रूपमा posimptomnuyu उपचार खर्च छैन।
पेट र intestines बाहिर धुन पहिलो कुरा। जब धोइदिनुभएर जटिलताहरू उत्पन्न गर्न सक्छ किनभने तयारी "Suprastin" antiemetic प्रभाव possesses। Replenish गर्न हराएको तरल पदार्थ को नुनखरा / ड्रिप मा शुरू गरिएको छ। sorbents निर्दिष्ट गर्न निश्चित हुनुहोस्, र शरीर, सबैभन्दा चिरपरिचित sorbent देखि toxins हटाउन मद्दत गर्छ - सक्रिय कार्बन।
उपचार को अर्को चरण - इन्जाइमहरु को उत्पादन को बहाली। यो उद्देश्य लागि पनि जैविक उत्पादनहरु र आहार पुनर्स्थापना छ "Festal", "Pancreatin" जस्ता औषधिहरू र अरूलाई आंतों वनस्पति को उल्लंघन नियुक्त।। जिगर र अन्तस्करणले प्रबन्ध सफाई र diuretics मा सहायता।
समग्र स्वास्थ्य र उपयुक्त भिटामिन र एंटीओक्सिडेंट को द्रुत रिकभरी सुधार गर्न। तिनीहरूले पनि हटाउने जब अधिमात्रा "suprastin" घटित एलर्जी प्रतिक्रिया बिरुद्ध लडाई योगदान हुनेछ।
एक घर एक अधिमात्रा भने, तपाईं कुनै पनि उपलब्ध sorbent प्रविष्ट गर्न, एक एम्बुलेन्स कल र पेट र intestines बाहिर धुन सुरु गर्न आवश्यक छ।
लागूपदार्थ संग विषाक्तता - त आईसीडी अधिमात्रा "suprastin" र अन्य लागूपदार्थको गुप्तिकरण गर्ने निर्णय गरे।
तपाईं ट्याब्लेटको को एक ठूलो संख्या प्राप्त गर्दा किनभने, तुरुन्तै कदम चाल्न आवश्यक दबाइ अवशोषण धेरै छिटो छ।
निम्नानुसार नशा पहिलो सहायता छ:
एक एम्बुलेन्स कल;
पानी संग पेट धुने;
एक सफाई enema वा आंत्र सफाई दिन रेचक औषधि गर्न;
बाहिर मूत्र मा toxins फ्लश गर्न पानी desoldering धेरै।
आमाबाबुले अधिमात्रा को "suprastin" बच्चाको संकेत देख्यो, र मात्र उसलाई, हामी यस बच्चा आतंक हुँदैन र तर्साउन, तपाईं सकेसम्म पहिलो सहायता प्रदान गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ।
पीडित को स्थिति मा पर्याप्त सुधार अस्पताल गर्न स्वीकारे गर्नुपर्छ संग पनि, एक सर्वेक्षण र आफ्नो हालत पालन गर्न केही समय सञ्चालन गर्न।
धेरै गम्भीर अवस्थामा, hospitalization देखाइएको hemodialysis (रगत शुद्धीकरण) विशेष कठिन अवस्थामा, बारम्बार गैस्ट्रिक lavage लगे छ। Writhing सिंड्रोम जस्तै "Tisercinum" "Diphenhydramine" "सोडियम Thiopental" को रूपमा हालतमा फिर्ता लिया थियो। आवश्यक रूपमा, सिकार को शरीर विशेष तयारी नियुक्त रिकभर गर्न।
पहिलो सहायता विषाक्तता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। विशेष मा गंभीर अवस्थामा दबाइ "Suprastin" को अत्यधिक प्रयोगबाट मृत्यु हुन सक्छ। वयस्क र बच्चाहरु मा अधिमात्रा केही मतभेद छ, तर परिणाम दुवै अवस्थामा धेरै गम्भीर हुन सक्छ।
नतिजा "suprastin" अधिमात्रा रोगी, गति सहायता र अरूलाई। तत्वहरू को व्यक्तिगत विशेषताहरु भर पर्छन्। यी प्रभाव जिगर को विकार, अन्तस्करणले र स्नायु प्रणाली समावेश गर्नुहोस्।
पाचन पर्चा को अवरोध सँगसँगै गंभीर विषाक्तता, जो पुनर्स्थापना समय लामो अवधि आवश्यक हुनेछ।
एक सामान्य नियम जस्तै, दबाइ विषाक्तता कारण चाँडै ठीक वा गल्ति गर्ने इच्छा छ।
आत्म-medicate खतरनाक छ, यसलाई अधिमात्रा वा अन्य नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ मनमा राख्नुहोस्। त्यसैले, तपाईं सधैं विशेषज्ञहरु को मदद, विशेष गरी बच्चाहरु को उपचार को लागि खोज्नुपर्छ।
, कुनै पनि औषधि लिन विशेष "Suprastin" मा मात्र सही औषधिको खुराक, एक चिकित्सक द्वारा आवश्यक। अधिमात्रा वयस्क र विशेष गरी छोराछोरीको "suprastin" खतरनाक छ र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
यस औषधिको खुराक वृद्धि र उपचार एक्लै खुराक परिमार्जन यो मूल्य छैन। जसरी इंजेक्शन दिने र चक्की लिएर एकै समयमा खतरनाक, अधिमात्रा उत्पन्न हुन सक्छ। विशेष ध्यान छोराछोरीको उपचार गर्न लग्नु गर्नुपर्छ। तिनीहरूले गल्ति अतिरिक्त ट्याब्लेटको खान छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्। तसर्थ, दबाइ बच्चाहरु को पहुंच बाहिर भण्डारण गर्नुपर्छ। यस औषधिको खुराक स्पष्ट र साइड इफेक्ट र contraindications पहिचान गर्न एउटा बाल विशेषज्ञ परामर्श प्रयोग गर्न पूर्व,।
सूची र समीक्षा: लागि बवासीर मलहम। के मलम बवासीर राम्रो?
"Topiramate": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक माइग्रेन, analogs
Miakaltsik - स्वस्थ हड्डी लागि स्प्रे
घर मिनी पट्टी कसरी छनौट गर्ने
अफ्रीका को जंगली जातिहरू संसारमा सबै भन्दा राम्रो उद्योग को सन्तानहरू हो,?
बिरुवाहरु को पुनरुत्थान
के बाट प्याटेन्ट छाला जुत्ता लगाउन?
हास्य "खबरदार, दादी!": अभिनेता, भूमिका, साजिश
पनरोकिंग छत: सामाग्री को चयन मा सल्लाह
"फुजी" स्याउको रूख। कसरी स्याउ "फुजी": विविधता को विवरण
कागति व्यञ्जनहरु संग Roulade
राम्रो जीवाणुरोधी आँखा खस्छ: नाम र विवरण